Ikhaya » Iindaba zesikhululo senqwelomoya » IHeathrow ibandakanya ngempumelelo ukusebenza kwezibaso zokuhamba ngenqwelomoya
Ugcino lweeenqwelo mafutha oluzinzileyo ukuya kwinxalenye yamandla e-Heathrow jets njengoko isikhululo seenqwelomoya sihamba ukunciphisa ukukhutshwa.
Ukusebenza neVitol Aviation kunye neNeste, iHeathrow iye yaba sisikhululo seenqwelomoya sokuqala sase-UK ukudibanisa ngempumelelo amafutha e-aviation (SAF) kulwabiwo lwamafutha
Phambi kwengqungquthela ye-G7, ipetroli izakuxutywa kwisikhululo seenqwelomoya esikhulu se-UK ukusukela ngomhla we-3 kweyeSilimela
Unikezelo, olingana nepetroli olufunekayo kumbane phakathi kweenqwelo moya ezimfutshane ezihamba 5-10, ijolise ekusebenzeni njengobungqina bengcinga ukwenza ukusetyenziswa kakhulu kweSAF ukuya phambili
Heathrow ifake ngempumelelo amafutha eenqwelo-moya ezizinzileyo (SAF) ekusebenzeni kwawo, phambi kweNgqungquthela ye-G7. Ukusebenza ecaleni kweVitol Aviation kunye ne-Neste MY Sustainable Aviation Fuel ™, ipetroli izakufakwa kunikezelo lwamafutha kwisikhululo seenqwelomoya namhlanje, kwaye idityaniswe ukuze isetyenziselwe iinqwelomoya ezisebenza eHeathrow kwezi ntsuku zimbalwa zizayo. Ngelixa ubonelelo ngepetroli lunokuba lincinci ngokuthelekisa- ukulingana nokuhambisa iinqwelo-moya ezifutshane ezi-5-10- oku kuziswa kwezorhwebo kuya kuseka ubungqina bengqondo kwisikhululo seenqwelomoya esikhulu sase-UK. Ukufezekisa eli nyathelo lilinyathelo elibalulekileyo lilinyathelo lokuqala ekubonakaliseni kuRhulumente ukuba itekhnoloji iyakusebenza ekunciphiseni ikhabhoni kubuchwephesha beenqwelomoya ukuba nje imigaqo-nkqubo echanekileyo yokukhuthaza ukukhuthaza ukuthatha inqanaba iyaphunyezwa.
Ubungcali beVitol Aviation kwindlela yokuphatha i-jet fuel iya kudityaniswa nentengiso ekhokelela kwimveliso ye-SAF yeNeste. I-Neste MY SAF iveliswa nge-100% kwinkunkuma ehlaziyekayo kunye nozinzo kunye nezinto ezisetyenzisiweyo, ezinje ngeoyile yokupheka esetyenzisiweyo kunye nenkunkuma yezilwanyana kunye neentlanzi. I-Neste YAM i-petroli ye-Aviation egcinekayo kwifom yayo ecocekileyo nangaphezulu komjikelo wobomi, inciphisa ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80 zokukhutshwa kwegesi ekrwada xa kuthelekiswa nokusetyenziswa kwepetroli ye-jet fossil.
Ukonyusa ukusetyenziswa kwe-Fuel yoQeqesho oluZinzileyo (SAF) sisixhobo esiphambili ekucazululeni ubuchwephesha beenqwelomoya. Ngokudibene nezinye iitekhnoloji, ibonelela ngendlela eya ekufezekiseni i-zero zero ye-net ngokuhambelana nesiVumelwano saseParis. Njengokuba sisondela kwiCOP26 eGlasgow ngoku lixesha lokuba uRhulumente, abatyali mali kunye nomzi mveliso basebenzisane ekomelezeni ukusetyenziswa kweSAF ukuqinisekisa umfutho wokwenene kweli shumi leminyaka.
Isibhengezo sanamhlanje siphawula inyathelo elilandelayo e-Heathrow nakwicebo lecandelo leenqwelo moya lase-UK lokuhamba ngenqwelomoya. Ukufezekisa ukukhula ngokukhawuleza kwemveliso yeSAFs, uHeathrow umemelela urhulumente wase-UK ukuba abeke igunya elonyukayo elifuna ubuncinci be-10% yokusetyenziswa kwe-SAF ziinqwelomoya ngo-2030, inyuke iye kwi-50% ubuncinci ngo-2050. kwiinkampani zeenqwelomoya ukukhuthaza ibango kunye nokukhuthaza utyalomali, kunye nokunceda ukuqinisekisa ukuba i-UK iphambili kwimveliso yeSAF.
UHeathrow ebesoloko enxibelelana namaqabane kubandakanya neenqwelo moya kwi-SAF ukuze i-UK hub ifezekise injongo yayo yokuba yenye yezona nqwelo-moya zizinzileyo kwihlabathi. Iipesenti ezingama-58 zeenqwelomoya zeHeathrow zihamba nge-10% yokusetyenziswa kweSAF ngowama-2030. IKomiti yoTshintsho lwemozulu ethembisayo malunga nokusetyenziswa kweSAF ngowama-2030 ibiyi-7%, ibonisa ukuba iinqwelomoya zeHeathrow sele zingama-84% kwindlela eya kolu qikelelo.